Air New Zealand waxay rabtaa inaad cabto qaxwadaada oo aad cunta koobka kafeega
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » kariska » Air New Zealand waxay rabtaa inaad cabto qaxwadaada oo aad cunta koobka kafeega
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kariska • News • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Air New Zealand waxay bilowday tijaabinta koobabka kafee ee la cuni karo macaamiishooda hawada iyo dhulka maadaama ay baareyso habab cusub oo casri ah si loola kulmo caqabadaheeda waara.
Shirkaddu waxay hadda u adeegtaa in ka badan siddeed milyan oo koob oo kafee ah sannad kasta.
Maamulaha Waayeelka Macaamiisha ee Air New Zealand Niki Chave ayaa sheegay in inkasta oo koobabka haatan ee shirkada ay yihiin kuwo la iskudarsan karo, hadafka ugu dambeeya ayaa ah in gebi ahaanba laga saaro qashinka.
Waxaan la shaqeynaynay iskaashi shirkad cusub oo New Zealand ah 'twiice' si aan u baarno mustaqbalka koobabka kafee ee la cuni karo, kuwaas oo dhadhankoodu yahay vanilj iyo waxyaabo aan caddeyn u lahayn. Koobabku wax weyn ayey u noqdeen macaamiishii isticmaalay kuwan oo weliba waxaan u isticmaalnay koobabka sidii maddiibadaha macmacaanka, ”ayay tiri Ms Chave.
Jamie Cashmore oo ah aasaasaha 'twiice', Jamie Cashmore ayaa sheegay in koobabka la cuni karo ay door weyn ka ciyaari karaan muujinta adduunka in qaabab cusub oo casri ah oo wax lagu soo rido la gaari karo.
“Waa wax laga argagaxo in Air New Zealand ay nagala shaqeeyso si aan u tusno macaamiisheeda iyo adduunka in yar oo ka mid ah caqliga iyo hal abuurka Kiwi ay runtii saameyn togan ku yeelan karto deegaanka iyadoo isla markaasna aan siineyno khibrad macmiil oo aad u fiican oo dhadhan fiican leh , ”Ayuu yidhi Mr Cashmore.
Mr Cashmore wuxuu leeyahay 'twiice' wuxuu ka shaqeynayaa fidinta noocyadeeda kala duwan ee maacuunta, wuxuuna rajeynayaa inay soo saaraan badeecooyin cusub sanadka soo socda.
Tijaabada koobka 'twiice' ee la cuni karo waxay taageertaa Air New Zealand oo dhawaan loo badalay koobabka dhirta ku saleysan ee saaran dhamaan diyaaradaha iyo meelaha lagu nasto. Koobabka dhirta laga sameeyo waxaa laga sameeyaa warqad iyo galley halkii laga isticmaali lahaa caag, taas oo awood u siinaysa in koobku ku burburo isku-darka ganacsiga. U wareegida koobabka dhirta ku saleysan ayaa la filayaa inay ka horjoogsato ku dhowaad 15 milyan oo koob inay tagaan qashin-qubka sanadkiiba. Shirkadda ayaa sidoo kale ku dhiirrigelinaysa macaamiisha inay la yimaadaan koobabkooda dib loo isticmaali karo ee saaran diyaaradaha iyo qolalka ay fadhiyaan.
Ms Chave ayaa sheegtay in shirkaddu ay sii wadi doonto tijaabinta koobabka kafee ee la cuni karo ee 'twiice's' isla markaana ay la shaqeyn doonto shirkadda iyo la-hawlgalayaasha kale si ay u sahamiyaan fursado ballaadhan oo ka dhigi kara wax-soo-saar muddo-dheer u leh shirkadda.